Gudcurkii Iftiimay – Xeernews24
Marka hore salaan qiimo badan dhamman Ummadda Soomaaliyeed salaan kaddib qormadan soo socoto waxaan kaga hadli doona qodobo dhowr ah oo la xiriira waayihii ugu dambeyay ee dalkeena, hiilada iyo hagar daamooyinka caalamka iyo ujeedooyinka Ummaddeed.
Shaki kuma jiro in dal bur buray oo mudo ku daahay fowdo nidaam la’aan iyo kala dambeyn la’aan taasoo sabab u ahayeen dagaladii sokeeye ee dalka soo maray, waxaana hubaal ah in dalkeenu soo maray xaalado kala duwan oo lahaa wajiyo aan qurux badneen sida boobka hantida Qaranka iyo mida shacab, daadinta dhiigga inta nugal iyo haldoorka Ummaddeed.
Wakhtigaan aan ka hadleyno waa marxalad kale oo qayb ka ahayd waayo aragnimadii aynu ka dhaxalnay waayihii kala duwanaa dalku xilligaas wuxuu lahaa dowlad kumeel gaar ah oo la ciir ciireysay amni daro, dhaqaale la’aan iyo dagaallo joogta ah oo ka imaanayey burcad diineedyo isbiirsaday.
Sanadku waa 2011 dowladii KMG ahayd ee dalkeenu waxaa ay wajahday xaalad kale oo culeyskeeda wadatay oo sii joojisay dhibatooyinkii wada jiray ee dalka ka jiray, waana abaarihii ku dhuftay koonfurta iyo qaybo ka mid ah bartamaha dalka oo sababay geerida kumanaan muwadiniin Soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolladii abaartu ay sameysay.
Ma jiro xiriir caalami ah dalkuna ma laha keyd dhaqaale oo xoog leh gobollada dalku iskuma furna oo wixii yar ee naftooda ay kasoo jareen shacabka Soomaaliyeed ee ka damqaday dhibta iyo xaaladda ay ku jiran walalahooda ay abaartu ku dhufatay, ma jiraan wadooyin loo mariyo meel walba waa mooryaan diimeed aaminsan daadinta dhiigga Ummadda, islaamka in uu jano ku galaayo, dowladdu ma laha gaadiid iyo gaashaan buur xoogan oo ka hor tagi kara maleeshiyaadlkaasi.
Maalin walba waa geeri ay gaajo iyo haraad sababeen, dhaguhu waxaa ay maqlaan baroorta iyo qaylo dhaanta dhibanayaasha Soomaaliyeed indhuhu way ilmeynayaan sacabo ka masaxana malaha, dadaalku waa joogto miro dhalkiisu waa yar yahay, dhawaaqa dowladda la hardamaysa cadowyada midoobay waa joogto, gurmadka bannaanku waa balan qaad iyo yabooh aan la rumeyn.
Dowladdaan aan saaxiibada lahayn dadkeeduna u diyaarsaneen hannaanka dowladnimo waxaa ay wajahday marxaladihii ugu darnaa ee oo labo geesood ahaa mid waa shacabkeedi oo gaajo iyo haraad u dhimanaya, midna waa shacabkeedi oo maalin walba si joogta ah dhiiggooda loo daadinayo oo aysan waxba ka qaban karin.
Markaan waa muhiim in aad hesho walaal ku garab gala, oo kula qaybsada dhibta iyo culeysyada kaa tan weyn, oo aadan xalka u hayn, baroortii shacabka oo ay wehliso qaylo dhantii dowladii kumeel gaarka ahayd ee dalka ka jirtay.
Alle qabo ma qado 19 August 2011 waa maalin taariikhi ah oo waxaa isbadalay wax walba oo u baahna in la badalo, waxaa soo baxay walaalo cusub oo xuduud iyo xiriir kale aynu inaga dhaxeyn, waa dowladda iyo shacabka Turkiga oo ka damqaday dhibta ka taagan dalka qaniga ah oo haddana ah dalka ugu baahida badan caalamka ee Soomaaliya.
Garoonkii diyaaradaha Muqdisho oo aysan mudo dhowr iyo labaanka sano aysan ka soo dagin diyaarad sida mas’uuliyiin maqaam sare leh, ayaa waxaa markii ugu horeysay kasoo degay xiligasi wefdi uu hogaaminayo Ra’iisul wasaarihii dalka Turkiga xiligaa oo ay la socdaan qoyskii qayb kamid ah.
Booqashadii Madaxweynaha Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan waxaa ay caalamka bartay in dalkaan la daala dhacaya culesyada uu u baahan yahay hiilo iyo garab istaag buuxda oo hagar la’aaneed si uu mar kale u soo kabto.
Hiilada iyo caawinta dalka Turkigu kuma koobneen raashin iyo daawooyin la gaarsiiyo malaayiin shacab Soomaaliyeed oo gaajeysnaa, waxaa dalka laga hir galiyay mashariic muhiim u ahaa dalkeena gaar ahaan dayactirka iyo balaarinta garoonka diyaaraha, dhismaha isbitaalka Digfeer, laamiyadii burbursanaa, dib u habeynta dekeda Muqdisho, deeqo waxbarasho oo dalka dibadiisa ah, kuwaasi oo leh heerar kala duwan oo dhanka waxbarashada ah iyo mashariic kale.
Dalka Turkigu waxaa uu caalamka tusay ahmiyadda Soomaaliya ay u leedahay siyaasada iyo iskaashiga dhaqan dhaqaale iyo wax wada qaybsiga, waxaan uu markii ugu horeysay Muqdisho ka dhistay Safaradda ugu weyn dalka Turkigu uu ku leeyahay caalamka oo dhan sida uu caddeeyay Madaxweynaha Dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan.
Saaxiibka Soomaaliya Madaxweynaha dalka Turkiga waxaa mar kale uu soo gaaray Muqdisho oo wax badan ka duwan Muqdishadii uu yimid, iyadoo ay hareereyn culeyso kala duwan balse xiligaan waa 19.8.2015 Muqdisho, waxaa ay soo ceshatay maqaamkii caasimad ay lahayd, waxaana ka socda horumaro kala duwan, waxaana uu wakhtigan u jooga Muqdisho xarig ka jarka mashariic waa weyn oo laga hir galiyay dalka.
W/Q Sharma’arke Maxamed Warsame
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/Turkish_Oldwoman.jpg 426 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-02 10:40:122017-08-02 10:40:12Gudcurkii Iftiimay
Mad-habta Kaatoligga & Soomaaliya, Maxay tahay Halista ka imaan karta Kaniisada... War Naxdin leh oo goordhow naga soo gaaray garoonka diyaaradaha Jabuuti &...